Nepali Christian Bible Study Resources - रोमी ८:३२-३९
» अध्ययन मालाहरू » रोमीको टिप्पणी » रोमी अध्याय ८ » रोमी ८:३२-३९
यहाँ हामी उत्पत्ति २२ को घटना सम्झन्छौं जहाँ अब्राहामले आफ्नो छोरालाई अन्तिम घडीमा बाँकी राखे। त्यसको तुलनामा परमेश्वरले भने आफ्नो प्रिय पुत्रलाई बाँकी राख्नुभएन।
क्रूसमा टँगाउनमा वास्तवमा जिम्मेवार को थिए? रोमी ८:३२ को "सुम्पिदिनुभयो" भन्ने शब्दलाई ध्यान दिनुहोस्। यस शब्दको माने "हस्तान्तरण गर्नु, अर्कालाई सुम्पदिनु" हो। कहिलेकाहीँ "धोका दिनु" भनेर पनि यसलाई अनुवाद गरिएको छ। यस शब्दको प्रयोग कहाँ कहाँ भएको कुरा हेरौं:
मत्ती २०:१८ मा यहूदाले ख्रीष्टलाई यहूदी शासकहरूकहाँ सुम्पिदिन्छ
मत्ती २०:१९ मा यहूदी शासकहरूले ख्रीष्टलाई रोमीहरूको हातमा सुम्पिदिन्छन्
मत्ती २७:२ मा यहूदी शासकहरूले ख्रीष्टलाई राज्यपाल पिलातसको हातमा सुम्पिदिन्छन्
मत्ती २७:३ मा यहूदाले ख्रीष्टलाई यहूदी शासकहरूको हातमा सुम्पिदिन्छ (मत्ती २०:१८ जस्तै)
ख्रीष्टलाई क्रूसमा टँगाउने काममा को जिम्मेवार थियो त? यहूदाले उहाँलाई धोका दियो। यहूदी शासकहरूले उहाँलाई दोषी ठहराए र उहाँलाई रोमीहरूकहाँ सुम्पिदिए। पिलातसलाई उहाँलाई रोमी सिपाहीहरूकहाँ सुम्पिदियो। रोमी सिपाहीहरूले उहाँलाई क्रूसमा टँगाए। उनीहरू सबैको एउटाएउटा भाग थियो, तर अन्तमा उहाँलाई सुम्पनुहुने परमेश्वर स्यवं हुनुहुन्थ्यो: परमेश्वरले नै "हामी सबका निम्ति उहाँलाई अर्पिदिनुभयो" भनेर भनिएको छ (रोमी ८:३२)। क्रूसमा मर्नका निम्ति आफ्नो एक मात्र जन्माइएको पुत्रलाई दिनुहुने त परमेश्वर स्वयं हुनुहुन्थ्यो (यूहन्ना ३:१६)। "उसलाई चोटैचोट पार्नु परमप्रभुलाई असल लाग्यो" (यशैया ५३:१०)। परमेश्वरले किन यसो गर्नुभयो? यो त हाम्रो निम्ति थियो! यो त हाम्रा पापहरूको निम्ति उहाँले दुःख भोग्नुभएको थियो र रगत बहाउनुभएको थियो र मर्नुभएको थियो! उहाँ "हाम्रा अपराधहरूका निम्ति सुम्पिइनुभयो" (रोमी ४:२५)। हामी एक एक नै ख्रीष्टको मृत्युको निम्ति जिम्मेवार थियौं किनकि उहाँ हाम्रो प्रतिस्थापकको रूपमा हाम्रो ठाउँमा मर्नुभयो। हामीले कमाएको ज्याला उहाँलाई खुवाइयो (रोमी ६:२३)। हामीले भोग्नुपर्ने मृत्यु उहाँले भोग्नुभयो!
३२ औं पदको तर्कले हरेक विश्वासीको हृदयलाई हर्षविभोर पार्नुपर्ने हो: परमेश्वरले यदि आफ्नो पुत्रलाई हाम्रो निम्ति अर्पिदिनुभयो भने के उहाँले उहाँको साथसाथै हामीलाई सबै कुराहरू सित्तैंमा दिनुहुन्न र? परमेश्वरले यदि हामीलाई सबभन्दा बढी मूल्यवान् वरदान दिनुभयो भने के उहाँले हामीलाई त्यसभन्दा कम मूल्यवान् वरदानहरू दिनुहुन्न र? जसले ठूलो भन्दा ठूलो दान दिइसक्नुभएको छ उहाँले निश्चय पनि कम मूल्यका वरदानहरू नदिइराख्नुहुन्न। परमेश्वरले यदि आफ्नो साथमा भएको सबभन्दा मूल्यवान् कुरा हामीलाई दिइसक्नुभएको छ भने हामीलाई आवश्यक पर्ने ती भन्दा साना कुरालाई दिनुहुन्न र? एकजना बुबाले आफ्नो छोराको निम्ति उसलाई खेल्नलाई हजारौं रूपैयाँ खर्च गरेर एउटा टेबुल टेनिसको टेबुल बनाइदिन्छ भने के उसले एउटा पिङ्पङ्ग बल पनि किनिदिदैन होला र? परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो सर्वोत्तम दिनुभएको छ! परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो पुत्र दिनुभएको छ! यदि हामीसँग ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भने हामीलाई चाहिएको सब छ (हिब्रू १३:५)।
परमेश्वरको चुनिएकाहरूको विरुद्धमा कसले दोष लाउला? परमेश्वरका चुनिएकाहरू चाहिँ रोमी ८:२९-३० मा बयान गरिएका छन्। तिनीहरू परमेश्वरका चुनिएकाहरू हुन्, जोहरू ख्रीष्ट-केन्द्रित परमेश्वरको मनसायअनुसार बोलाइएका छन्। परमेश्वरले तपाईंलाई धर्मी ठहराउनुभएको छ! तपाईं विश्व-सृष्टिकै सर्वोच्च अदालतमा जाँचिनुभएर निर्दोष भेट्टाइनुभएको छ! तपाईंको मामिला विश्व-सृष्टिकै सर्वोच्च अदालतमा फत्ते भइसकेको छ र तपाईंलाई दोष लाउन सक्ने त्यसभन्दा उच्च अदालत नै छैन। यदि धर्मी न्यायधीश परमेश्वरले नै तपाईंलाई धर्मी ठहराउनुभएको छ भने तपाईंलाई दोषी ठहराउन सक्ने अझ ठूलो कुनचाहिँ न्यायधीश होला त्यहाँ? स्पर्जनले भने, "यदि न्यायधीश स्वयंले मलाई फुक्का छोडे भने मलाई कसले दोष लाउन सक्छ र? विश्व सृष्टिकै सर्वोच्च अदालतले मलाई धर्मी भनेर घोषणा गरिसकेको छ भने कसले मेरो विरुद्धमा कुनै आरोप लाउला र?" (All of Grace, p.23)। पृथ्वीकै न्यायकर्ता हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने हामीलाई कुनै कुराको डर हुनुपर्दैन।
कसले मलाई दोष लाउला? अवश्य ख्रीष्टले त होइन किनकि उहाँ मेरो निम्ति मर्नुभयो! मेरो दण्ड उहाँमाथि पर्यो (रोमी ८:३)! उहाँ मेरो निम्ति मर्नु मात्र भएन, उहाँ मेरो निम्ति जिउनु पनि हुन्छ। शैतानले मलाई दोष लाउला र मेरो विरुद्धका उसका आरोपहरू सत्य पनि होलान्, तर प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति अन्तर्विन्ती गर्न जिउनुहुन्छ। यी महत्त्वपूर्ण खण्डहरू पढ्नुहोस्: १ यूहन्ना २:१-२; हिब्रू ७:२५; ९:२४।
सन्दर्भमा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्: पवित्र आत्मा हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ (रोमी ८:२६); परमेश्वर पिता हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ (रोमी ८:३१); परमेश्वरको पुत्र हाम्रो निम्ति हुनुहुन्छ (रोमी ८:३४)। हो त्रिएक परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ!
"ख्रीष्टको प्रेम" ले हाम्रो निम्ति भएको ख्रीष्टको प्रेमलाई जनाउँदछ। त्यस प्रेमदेख कसैले (पद ३५) र कुनै कुराले (पद ३९) हामीलाई अलग पार्न सक्दैन! हामी ख्रीष्टको प्रेममा सदा सुरक्षित र सुनिश्चित छौं! यस पदमा प्रयोग भएका केही शब्दहरूलाई विचार गरौं:
सङ्कष्ट (थ्लिप्सिस्) = दबाब, थिचिनु, कष्ट, बहिरी परिस्थितिहरू र कठिनाइहरूबाटको बिपत्ति
क्लेश (स्टेनोखोरिया) = कठिनाइ, बिपत्ति, अापत्ति, थिचोमिचोमा पार्ने कठिनाइहरू (२ कोरिन्थी ४:८)
सतावट (डियोग्मस्) = चोट पुर्याउन र हानि गर्न विश्वासीहरूलाई पिछा गर्नु, लखेट्नु (२ तिमोथी ३:१२; २ कोरिन्थी ४:९)
अनिकाल (लीमस्) = पहिलो शताब्दीका विश्वासीहरूलाई अनिकालको अनुभव थियो (प्रेरित ११:२८); प्राकृतिक पक्रोपहरूले समेत हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन
नाङ्गो अवस्था (गुम्नोटेस्) = भयङ्कर अभावको अवस्था, पर्याप्त लुगाफाटा नहुनु, विषम गरिबी
खतरा (कीन्डुनस्) = जोखिम (१ कोरिन्थी १५:३० पढ्नुहोस्)
तरवार (माखाइरा) = तरवारले मारिनु (यूहन्नाका दाजु याकूब अवश्य पनि रोमी ८:३५ को सत्यताका निम्ति धन्यवादी थिए)।
"मारिँदछौं" वर्तमान कालमा छ। हामी निरन्तर दिनभरि मारिँदछौं। हामी हर घडी मृत्युको जोखिममा छौं भन्ने अर्थ बोकेको छ यस अतिशयोक्तिले (१ कोरिन्थी १५:३०)। हिब्रू ११:३६-३८ मा परमेश्वरको जनहरूलाई गरिने व्यवहारको बयान हेर्नुहोस्।
३६ औं पदमा हामी भेडाहरूझैं काटिन्छौं! ३७ औं पदमा हामी विजेताहरूभन्दा पनि बढी छौं! कस्तो तुलना!
"छौं" (पद ३७) = अहिले नै यो साँचो छ! "यी सबै कुराहरूमा" -- यी सबै कठिनाइहरूका बीचमा। "विजेताहरूभन्दा महान्" = अति-विजेताहरू, अति जय पाउनेहरू, अति जित्नेहरू। यसले त्यस्तोलाई जनाउँदछ जसले बेसरी जित्छ, प्रशस्त गरी विजयी हुन्छ। हामी केवल विजेताहरू मात्र होइनौं तर हामी विजेताहरूभन्दा पनि बढी हौं। हामी जित्नेहरू मात्र होइनौं, हामी जित्नेहरूभन्दा पनि बढी हौं!
यो ग्रीकको हुपेरनिकाओ शब्द हो (निकाओ - जित्नु, जय पाउनु शब्द प्रकाश २-३ अध्यायहरूमा पटकपटक भेटिन्छ)। हामी केवल जय पाउनेहरू मात्र होइनौं तर हामी जय पाउनेहरूभन्दा बढी हौं! हामी विजयी मात्र होइनौं, विजयीअरूभन्दा पनि बढी हौं! यसैले, कोही-कोही विश्वासीहरू जय पाउनेहरूमा पर्दैनन् भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र? [जुन चाहिँ कुनै-कुनै आंशिक- र्याप्चर सिकाउनेहरूले भन्छन् र अरूले पनि]। कुनै पनि विश्वासी जय पाउनेभन्दा कम हुँदैन, सबै विश्वासीहरू "विजेताहरूभन्दा बढी" हुन्छन्! हाम्रो जय भनेको ज्यादै प्रचण्ड विजय हो!
"यी सबै कुराहरू" = ३५ औं पदमा उल्लेखित कुराहरू
हामीलाई प्रेम गर्ने को हो? रोमी ८:३५ मा पढ्नुहोस् -- ख्रीष्ट आफै। ख्रीष्टद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा बढी छौं। २ कोरिन्थी २:१४ पढ्नुहोस् (हामी आफैमा विफल हुन्छौं तर ख्रीष्टमा विजयी हुन्छौं)।
यी महिमित पदहरूमा पावल सारा विश्व-सृष्टि भरि खोजतलाश गर्न थाल्छन् कतै हामीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्ने कुनै कुरा छ िक भनेर। मृत्यु पहिलो स्थानमा उल्लेख छ किनकि यो मानिसको सबभन्दा ठूलो डर हो (हिब्रू २:१५ -- मृत्यु "डरहरूका राजा" हो)। विश्वासीहरू शरीरमा कहिल्यै मर्नेछैनन् भनेर परमेश्वर भन्नुहुन्न तर शारीरिक मृत्युले उनीहरूलाई उहाँदेखि कहिल्यै अलग पार्न सक्दैन भनेर भन्नुहुन्छ! वास्तवमा, ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने व्यक्तिको निम्ति, मृत्यु त परमेश्वरकै उपस्थितिमा पुर्याउने सँघार मात्र हो जहाँ पुगेर उसले उहाँको प्रेम झन् झन् जान्नेछ:
फिलिप्पी १:२१,२३ -- "मेरा निम्ति जिउनु ख्रीष्ट हो मर्नुचाहिँ लाभ हो…बिदा लिऊँ र ख्रीष्टसँग रहुँ भन्ने इच्छा हुन्छ जुन चाहिँ अति नै राम्रो हो" [अक्षरशः अनुवाद]
२ कोरिन्थी ५:८ --"शरीरबाट अलग भएर बरु प्रभुसित रहनु नै इच्छा गर्छौं"
परमेश्वरले शारीरिक मृत्यु हटाउनुहुन्न (अपवादको रूपमा ख्रीष्ट आफ्नो मण्डलीलाई लिन आउनुहुँदा बाँचिरहेका विश्वासीहरूको सवालमा बाहेक -- १ कोरिन्थी १५:५१-५२), तर मृत्युको खील चाहिँ हटाइदिनुहुन्छ (१ कोरिन्थी १५:५५)। खील नभएको मृत्युको कुनै डर मान्नु छैन हामीलाई (जसरी खील बिनाको ठूलै मौरी पनि एउटा केही गर्न नस्कने किरो बाहेक केही होइन)।
"न जीवनले" -- जीवनका कुनै पनि परिस्थिति त्यो जतिसुकै कठिन वा ठूलो परीक्षा किन नहोस्, त्यसले मलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्नेछैन।
"न स्वर्गदूतहरूले" (principalities) -- शासन गर्ने स्वर्गदूतहरू, राजकुमार स्वर्गदूतहरू,
"न प्रधानताहरूले" -- शक्तिशाली शासक स्वर्गदूतहरू। कुनै पनि स्वर्गदूतहरू वा दुष्टआत्माहरू वा शैतान आफैले समेत विश्वासीलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन (१ यूहन्ना ४:४)।
"न अहिलेका कुराहरूले, न पछि आउने कुराहरूले" -- वर्तमानमा तपाईं जे जस्तो कुरा भएर जानु परिरहेको छ वा भविष्यमा जे जस्तो कुरा सामना गर्नुपर्ने छ, ती कुनैले पनि तपाईंलाई ख्रीष्ट र उहाँको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्दैन। ख्रीष्टकाहरू उहाँसँग सदाका लागि एक भएका छन्! धन्यको एकता!
"न उचाइले, न गहिराइले" (पद ३९) -- तपाईं जति माथिसम्म उक्लन सक्नुहुन्छ वा जति तलसम्म ओर्लन सक्नुहुन्छ, सबभन्दा गहिरो बेसीमा वा सबभन्दा अल्गो पर्वतमा तपाईंले कुनै चीज वा कोही व्यक्ति भेट्टाउनुहुनेछैन जसले तपाईंलाई ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पार्न सक्छ।
"न अरू कुनै सृष्टिले" = सारा सृष्टिमा न अरू कुने कुराले। पावलले यो पनि थप्छन्, कतै कुनै करा नछुटोस् भनेर। ज्यादै जोडदार शब्दहरूमा पावलले हामीलाई परमेश्वरको प्रेममा भएको हाम्रो पूर्ण सुरक्षाको सम्बन्धमा निश्चयता प्रदान गर्दछन् जुनचाहिँ केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्र पाइन्छ।
धेरैजना व्यक्तिहरू यी अन्तिम दुई पदहरूलाई लिएर कुनै भिन्नतै नराखीकन जोकोहीलाई प्रयोग गर्न खोज्छन्, चाहे उनीहरूले मुक्ति पाएका होस् वा नपाएका होस्। यी पदहरू केवल उनीहरूलाई मात्र लागु हुन्छ जोहरू "ख्रीष्ट येशूमा" छन् (रोमी ८:१) अनि जोहरू "परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरू" हुन् र जोहरू "उहाँको मनसायअनुसार बोलाइएका" छन् (रोमी ८:२८)। यी पदहरू दाबी गर्न अरू कसैलाई पनि अधिकार छैन। विश्वास नगर्नेहरू ख्रीष्टको प्रेमदेखि अलग पारिनेछन्, अनि त्यो अनन्त अनन्त सम्मको लागि हुनेछ (२ थेस्सलोनिकी १:८-९; मत्ती २५:४१,४६; ७:२१-२३, इत्यादि)।
रोमी ८ अध्याय सुरु गरिएको थियो "कुनै दण्डको आज्ञा छैन" (NO CONDEMNATION) बाट र अन्त भएको छ "कुनै कुराले अलग पार्नेछैन" (NO SEPARATION) मा! जति हामी परमेश्वरको अनुग्रह र हाम्रो महान् मुक्तिलाई बुझ्दछौं त्यति नै हामी यस वर्तमान यगमा आत्मसंयम, धार्मिकता र भक्तिको जीवन जिउने इच्छा गर्नेछौं (तीतस २:११-१२) ताकि हामी परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकौं जसले हाम्रो निम्ति यति महान् ठूला कुराहरू गरिदिनुभएको छ! उहाँलाई अहिले र सदा महिमा भइरहोस्!
« रोमी ८:२८-३१
रोमी ९:१-५ »